Owase-USA uzishaye zonke ezingu-16 elobola isangoma (65) | IOL Isolezwe
Owase-USA uzishaye zonke ezingu-16 elobola isangoma (65)
Isolezwe / 10 September 2012, 4:06pm /
KULINDELEKE ziwushaye maduze esangomeni saseMgungundlovu uMakhosi Gladys Msho Nozimeme (65), kwesokudla, nesinqandamathe uMnuz Victor McGill (65), ophakathi. Oshaya amathambo yindodakazi kaNksz Nozimeme, uMakhosi Thembi Khumalo (28) Isithombe: SHAN PILLAY
INDODA yomlungu engeyokuzalwa e-USA izoqopha umlando ishadelwa owesifazane oyisangoma esidumile eTable Mountain, eMgungundlovu ngoSepthemba 23 nonyaka.
Umshado kaMnuz Victor McGill (65) noMakhosi Gladys Nozimeme (65) kubhekeke ukuba udonse amehlo abantu abaningi bendawo njengoba kuyinto engajwayelekile ukuthi yenzeke.
UMnuz McGill uthi usezikhokhile zonke izinkomo zamalobolo ezingu-16 zoboya into aseyilindele usuku olukhulu lomshado. Le ndoda ingeyokuzalwa e-USA, ePhiladelphia kanti ichithe iminyaka yayo eminingi ezweni laseNdiya futhi izobe iqala ukushadelwa. UMcGill uthi esefike kuleli ufikele kuyena umakhosi wamthwasisa njengoba naye eseyisangoma ngokugcwele.
Isangoma uNozimeme uphelelwa amagama uma ecabanga ngomshado wakhe noMcGill kodwa akusho ukuthi ngesikhathi embona okokuqala kwavele kwacaca ukuthi uzoba yingxenye yempilo yakhe. UNkk Nozimeme naye unengane eneminyaka engu-20 eyisangoma.